SALAMO 83 F. 2 | Fitandremana Ankadifotsy
SALAMO 83 F. 2
Ny fanapotehana ny vahoaka sy ny firenen’Israely dia efa tanjona mandrakariva teo amin’ireo firenena manodidina azy.
Voahodidina fahavalo ny vahoaka Israely. Manandratra vavaka fitalahoana ny mpanao Salamo ka nainga tamin’ny fampatsahivany an’Andriamanitra ny famonjena nataony tamin’ny lasa (10-12). Matoky Azy tanteraka izy satria Andriamanitra dia tsy miova mandrakizay. Ary ianao, mbola misy fanahiana ve ?
Fikatsahana ny voninahitr’Andriamanitra. Tsy ny mikatsaka ny momba azy loatra anefa no maha tery an’i Asafa fa ny hisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra hany ka ampatsahiviny Azy eto fa taranaka nofidiny anie Israely (5,13). Izay manome voninahitra Ahy dia homeko Voninahitra, hoy ny Tompo. Tsy liana amin’izany hetsika izany ve ianao eo amin’ny fiainanao ?
Mahery Andriamanitra. Mangataka izy mba hiseho amin-kery Andriamanitra ka ho resy ireto fahavalo. Dia hiseho ny voninahitr’Andriamanitra ka hiaiky ny olona rehetra fa Izy no Mpanjakan’izao tontolo izao satria Izy no mihazona azy ary Izy no mifehy azy. Setrin’izany dia hitady Azy tokoa ny firenen-drehetra ary liana te hahafantatra Azy. (17, 19).
Fanentanana : Tadiavo Andriamanitra fa Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny andro mahory Izy !